Iharan’ny fihazana tsy ara-dalàna ny biby mpirenireny srilankey mandritra izao areti-mandringana izao · Global Voices teny Malagasy
Vetivety isika dia ho very zava-drehetra an'ny natiora."
Voadika ny 04 Aogositra 2020 5:12 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, 日本語, русский, čeština , Nederlands, Català, Deutsch, Português, English
Leopard ambony vatakazo volontany. Saripikan'ny Pixabay avy amin'i Pexels. CC0.
Miavaka tokoa ny fiainan-drenireny (biby tsy fiompy) ao Sri Lanka ho an'ny nosy iray manana velarantany 65.610 km2 (25.330 sq mi). Na dia kitro ifaharan'ny sehatr'asa fizahantany ao amin'ny firenena aza, dia voarahona hatrany ny biby noho ny fahasimban'ny ala, fahaverezan'ny akany voajanahary ary ny fihazana tsy ara-dalàna. Raha nahita fahombiazana ny firenena amin'ny fifehezana ny fielezan'ny COVID-19 raha ampitahaina amin'ireo fiernena Aziatika atsimo mifanakaiky aminy, dia tsikaritra ihany koa ny fihabetsahan'ny fihazana tsy ara-dalàna noho ny fiakaran'ny tsy fananana asa nandritra ny fihibohana.
Nampihatra ny fihibohana manerana ny firenena i Sri Lanka tamin'ny 20 marsa izay nitohy mandra-pahatonga ny 29 Jona. Maro mahatratra 500.000 ny olona tsy an'asa nandritra ny areti-mandringana, ka nahatratra ny tampony tao anatin'ny 10 taona ny tsi-fananana asa.
Tamin'ny voalohany ny fihibohana nahazoana fiantraikany tsara tamin'ny fiainan'ny biby tsy fiompy tany amin'ireo valanjavaboarim-pirenena malaza tahaka an'i Yala, Udawalawe, Minneriya, Kaudulla ary Horton Plains, izay nitarainana fa be loatra ny fitsidihana azy ireo. Na izany aza, rehefa nihena ny isan'ny mpitsidika dia lasa nanintona ireo mpihaza amin'ny fomba tsy ara-dalàna ireo vala ireo.
Tamin'ny 22 Avrily, maty voatifitra nandritra ny fanenjehana ireo mpihaza biby tsy fiompy tao amin'ny Valan-javaboarim-Pirenena Gal Oya tao atsinanan'i Sri Lanka ny mpiambina ala Pradeep Bandar. Narehitry ny tinadin'ny mpizaha tany anatiny manao azy ireny ho sakafo mafilotra ny fihazana tsy ara-dalana ny hena avy any akata (indrindra fa lambo, ombimanga hita, ary diera sambar).
Araka an'i Nayanaka Ranwella mpahay tontolo iainana, tombanana ho biby mpirenireny 600 any ho any no maty novonoin'ny mpihaza tsy ara-dalàna isan'andro hatramin'ny nanombohan'ny fihibohana. Olona 40 tany ho any ny efa nosamborin'ny Departemantan'ny Fikajiana ny Voary Dia (DWC) ao amin'ny firenena hatramin'ny volana avrily amin'ity taona ity, ary noho ny fihazana tsy ara-dalàna ny ankamaroany.
Hemantha Withanage, mpahay tontolo iainana sady mpanorina ny Centre for Environmental Justice [Foiben'ny Rariny ara-Tontolo Iainana, nanamarika fa matetika amin'ireny tranga ireny, tsy miditra amin'ny fikambanan'olona manao fihazana tsy ara-dalàna ireo olona ireo, fa manao izany “hitady sakafo” na hahazo vola noho ny tsy fananana asa ahafahana mamelo-tena.
Niantsafa tamin'ny mpanorina sy filohan'ny Fikambanana Wildlife Conservation Society ao Sri Lanka Ravi Corea momba ny fihazana tsy aar-dalàna nandritra ny valanaretina COVID-19 i Anya De Saram-Larssen mpanoratra ao amin'ny Groundviews:
Iray amin'ny traika ny valan'aretina mody tsy dia manao ahoana nefa tena ratsy dia ratsy amin'ny fikajiana ny voary ao Sri Lanka ny fihabetsahan'ny fihazana nandritra ny fihibohana, sy ny fikapana hazo sy fitrandrahana vatosoa tsy ara-dalàna. Manombana ny tatitry ny gazety ao an-toerana fa manodidina ny 600 eo ho eo isan'andro ny vorondia sy biby novonoina hatramin'ny nanombohan'ny fihibohana. Ny tsy fahazoana antoka ny sakafo sy ny fahaverezan'asa no anisan'ny antony mahatonga ny fitomboan'ny fihazana tsy ara-dalàna. Lasa marefo tsy misy toy izany ny voary dia noho ny tsi-fisian'ny fiarovana. Tsy menatra mihitsy ireo mpihaza tsy ara-dalàna mivezivezy any amin'ny valan-javaboarim-pirenena sy ny faritra voaaro, izay diera tsikaritra sy trandraka no anisan'ireo biby hazaina indrindra.
Biby ahiana ho lany taranaka tombanana ho 700-950 isa tamin'ny taona 2015 ny leopara Sri Lankey (Panthera pardus kotiya). Maromaro ihany koa ny leopara maty amin'ny fampiasana fandriby tao anatin'ny volana vitsivitsy izay.
Nisioka ny mpikaroka Amantha Perera:
Fahafatesana mampihoronkoditra iray hafa amin'ny leopara dia ao Sri Lanka – fahafito amin'ny maty noho ny fandriby tao amin'ny Havoana Afovoany eto Sri Lanka, telo farafahakeliny no voavotra – මන්දකට අසුව තවත් දිවියෙකු මරණයට (SARY MAMPIHORONKODITRA) – Antsipiriany -
Nibedy ny tsi-fihetsehan'ny governemanta amin'ny fahafatesan'ny leopara i Thilanka Rathnayake ny mpamakafaka politika sady mpikatroka:
Miharihary fa tsy anopazan'ny governemanta maso na dia kely monja aza ny voary dia, tontolo iainana na zavatra hafa. Matory ny minisiteran'ny voary dia sy ireo manampahefana tokony handray andraikitra. Tokony hisy ny fanasaziana matotra sy henjana ho amin'izany. Raha tsy izany dia ho ringana ao anatin'ny taona vitsy ny leopara ao Sri Lanka
Taorian'ny fahatafintohinam-bahoaka, nanome baiko hampanaovana fanadihadiana avy hatrany amin'ny fihazana ny minisitra srilankey Mahinda Rajapaksa tamin'izao faramparany jolay izao.
Na teo aza izany dia toa tsy ho vetivety dia hisy ny fiovan'ny toedraharaha. Tsy manana ekipa ampy ny Departemantan'ny Fikajiana ny Voary Dia (DWC) hisahana ny fanao tsy ara-dalàna any amin'ny faritra arovana, izay mivelatra amin'ny 12%-n'ny velaratanin'i Sri Lanka raha atambatra. Maneho hevitra ao amin'ny Facebook i Ravindra Attygalla:
Raha misy olona “madio sy tia mikarakara” ao amin'ny departemanta (DMC) dia tsy ho nitranga izao. Tsy mila maka dingana manokana ny olona tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny natiora sy ny fonenana. Vetivety isika dia ho very zava-drehetra an'ny natiora.